ဘာစီလိုနာနဲ့ လကျရှိထိ စာခြုပျသဈ မခြုပျပမေယျ့ အသငျးမှာ မကျဆီဆကျနဖွေဈမှာ ဘာကွောငျ့လဲ? – Sports A2Z
ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ တိုကျစဈမှူး လီယှနျနယျ မကျဆီ ဆကျနဖွေဈအောငျ တကိုယျတျောတိုကျပှဲဝငျပွီး စညျးရုံးနသေူက တကြော့ပွနျ ဥက်ကဋ်ဌသဈ လာပေါ့တာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ဦးဆောငျနိုငျမှုစှမျးရညျတှကေို အသဈတဖနျ​ ပွနျလညျသကျသပွေပွီး ပေါငျ ၁.၁ ဘီလြံတငျရှိနတေဲ့ ကွှေးမွီကို ဖွရှေငျးဖို့ ​အားစိုကျကွိုးပမျးနတောပါ။.
ဒါ့အပွငျ အသငျးရဲ့ ပုံရိပျအစဈကို ပွနျလညျမွငျ့တကျလာဖို့ အဓိကဆှဲဆောငျနခွေငျးဟာ မကျဆီနဲ့ ဘာစီလိုနာဆိုတာ ခှဲထားလို့မရတဲ့ ပရိသတျဆန်ဒတခုဖွဈသလို လကျရှိအခြိနျမှာလညျး စာခြုပျသဈကမျးလှမျးမှုအပျေါ မကျဆီရဲ့ အားပါးတရတုံ့ပွနျမှုကို ကကြေနြေပျနပျကွီးရယူဖို့ အလိုရှိနကွေောငျး သိရပါတယျ။
မကျဆီရဲ့ စိတျဆန်ဒမှာတော့ လာမာစီယာအကယျဒမီကြောငျးသားဘဝကို ဖွတျသနျးပွီး ငယျဘဝကတညျးက နှဈပေါငျးမြားစှာကွာမွငျ့တဲ့အထိ သံယောဇဥျတှယျလာခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာကို စှနျ့ခှာလိုစိတျ ရှိမနကွေောငျး သိရပွီး သူ့ရဲ့ ၃၄ နှဈပွညျ့မှေးနဖွေဈတဲ့ ဒီနေ့ ဇှနျလ ၂၄ ရကျနမှေ့ာတော့ ဥက်ကဌလာပေါ့တာက စိတျအားထကျသနျစှာနဲ့ စာခြုပျသဈတရပျကို ကမျးလှမျးသှားခဲ့တာပါ။
ထာဝရအကောငျးဆုံးကစားသမားတဖွဈလဲ အာဂငျြတီးနားဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးကွီးဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ငှေ​​​ကွေးခြှတျခွုံကမြှုကို ဖွရှေငျးပေးနိုငျခွငျး၊ အသငျးအတှကျ ကွျောငွာနဲ့ စပှနျဆာငှစေီးဆငျမှုတှကေို ဆကျလကျရှငျသနျစနေိုငျခွငျးစတဲ့ သူ့ရဲ့ အကြိုးပွုနိုငျစှမျးကို အသုံးခဖြို့ သူနလေိုတဲ့ ငယျဘဝအသငျးမှာလညျး ဆကျနခှေငျ့ကို Win-Win အနအေထားတခုအဖွဈ ဖနျတီးသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ကလပျအသငျးရဲ့ ပုံရိပျအကွီးမားဆုံးနဲ့ ထာဝရအကွီးကယျြဆုံးကစားသမားကွီးကို ဘယျနညျးနဲ့မှ လမျးခှဲလိုစိတျမရှိတဲ့ ဘာစီလိုနာရဲ့ ကမျးလှမျးမှုက ထငျရှားနခေဲ့ပွီး ကိုပါအမရေိကဖလားအတှကျ ဘရာဇီးလျကို ရောကျနတေဲ့ မကျဆီနဲ့ လာပေါ့တာရဲ့ စကားပွောဆိုမှုအဆငျ့တှဟော အလေးအနကျရှိခဲ့သလို သူတို့နှဈဦးကွားက ဆကျဆံရေးကလညျး ခိုငျမာနကွေောငျး သိရပါတယျ။
နောကျဆုံးရသတငျးတှအေရ စာခြုပျသဈတရပျဖွဈပျေါလာဖို့ အလှနျနီးစပျနကွေောငျး သိရှိရပွီး ဇှနျလ ၃၀ ရကျနမှေ့ာ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးမယျ့ မကျဆီကို အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ အဆုံးရှုံးမခံမယျ့ လာပေါ့တာက နောကျဆုံးအခှငျ့အရေးကနျြရှိခြိနျ လကျကနျြ ၆ ရကျအတှငျး တှငျးမှာ သဘောထားတရပျ အမွနျဆုံးရရှိအောငျ ညှိယူပွီး စာခြုပျသဈခြုပျဆိုနိုငျဖို့ တှနျးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဘာစီလိုနာကမျးလှမျးလိုကျတဲ့ စာခြုပျသဈမှာတော့ GOAT ကွီးကို ၂၀၂၃ ခုနှဈအထိ ဆကျထိနျးသှားမှာဖွဈပွီး နူးကမျ့မှာ ဖိအားတှဟော အပူလုံးတခုလို မွငျ့တကျနခြေိနျမှာ စာခြုပျသဈတရပျကို လာမယျ့ရကျပိုငျးအတှငျး တရားဝငျကွငွောနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ခကျြခိုငျမာနကွေောငျး သိရပွီး စိတျခယြုံကွညျရတဲ့ အပွောငျးအရှသေ့တငျးထောကျ ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနိုကလညျး ဘလှနျဒေါ ၆ ခုရှငျဟာ ကတျတလနျအသငျးမှာ ဆကျနဖွေဈမယျလို့ အတညျပွုလိုကျလို့ ဝမျးသာစရာသတငျးကောငျးဖွဈလာကွောငျး တငျဆကျပေးပါရစေ။
ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ တိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဆက်နေဖြစ်အောင် တကိုယ်တော်တိုက်ပွဲဝင်ပြီး စည်းရုံးနေသူက တကျော့ပြန် ဥက္ကဋ္ဌသစ် လာပေါ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေကို အသစ်တဖန်​ ပြန်လည်သက်သေပြပြီး ပေါင် ၁.၁ ဘီလျံတင်ရှိနေတဲ့ ကြွေးမြီကို ဖြေရှင်းဖို့ ​အားစိုက်ကြိုးပမ်းနေတာပါ။.
ဒါ့အပြင် အသင်းရဲ့ ပုံရိပ်အစစ်ကို ပြန်လည်မြင့်တက်လာဖို့ အဓိကဆွဲဆောင်နေခြင်းဟာ မက်ဆီနဲ့ ဘာစီလိုနာဆိုတာ ခွဲထားလို့မရတဲ့ ပရိသတ်ဆန္ဒတခုဖြစ်သလို လက်ရှိအချိန်မှာလည်း စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် မက်ဆီရဲ့ အားပါးတရတုံ့ပြန်မှုကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးရယူဖို့ အလိုရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့ စိတ်ဆန္ဒမှာတော့ လာမာစီယာအကယ်ဒမီကျောင်းသားဘဝကို ဖြတ်သန်းပြီး ငယ်ဘဝကတည်းက နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အထိ သံယောဇဉ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာကို စွန့်ခွာလိုစိတ် ရှိမနေကြောင်း သိရပြီး သူ့ရဲ့ ၃၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာတော့ ဥက္ကဌလာပေါ့တာက စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ စာချုပ်သစ်တရပ်ကို ကမ်းလှမ်းသွားခဲ့တာပါ။
ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားတဖြစ်လဲ အာဂျင်တီးနားဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးကြီးဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ငွေ​​​ကြေးချွတ်ခြုံကျမှုကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း၊ အသင်းအတွက် ကြော်ငြာနဲ့ စပွန်ဆာငွေစီးဆင်မှုတွေကို ဆက်လက်ရှင်သန်စေနိုင်ခြင်းစတဲ့ သူ့ရဲ့ အကျိုးပြုနိုင်စွမ်းကို အသုံးချဖို့ သူနေလိုတဲ့ ငယ်ဘဝအသင်းမှာလည်း ဆက်နေခွင့်ကို Win-Win အနေအထားတခုအဖြစ် ဖန်တီးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ကလပ်အသင်းရဲ့ ပုံရိပ်အကြီးမားဆုံးနဲ့ ထာဝရအကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားကြီးကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ လမ်းခွဲလိုစိတ်မရှိတဲ့ ဘာစီလိုနာရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုက ထင်ရှားနေခဲ့ပြီး ကိုပါအမေရိကဖလားအတွက် ဘရာဇီးလ်ကို ရောက်နေတဲ့ မက်ဆီနဲ့ လာပေါ့တာရဲ့ စကားပြောဆိုမှုအဆင့်တွေဟာ အလေးအနက်ရှိခဲ့သလို သူတို့နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေးကလည်း ခိုင်မာနေကြောင်း သိရပါတယ်။
နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရ စာချုပ်သစ်တရပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အလွန်နီးစပ်နေကြောင်း သိရှိရပြီး ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့် မက်ဆီကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ အဆုံးရှုံးမခံမယ့် လာပေါ့တာက နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကျန်ရှိချိန် လက်ကျန် ၆ ရက်အတွင်း တွင်းမှာ သဘောထားတရပ် အမြန်ဆုံးရရှိအောင် ညှိယူပြီး စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ တွန်းသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာစီလိုနာကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့ စာချုပ်သစ်မှာတော့ GOAT ကြီးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ ဆက်ထိန်းသွားမှာဖြစ်ပြီး နူးကမ့်မှာ ဖိအားတွေဟာ အပူလုံးတခုလို မြင့်တက်နေချိန်မှာ စာချုပ်သစ်တရပ်ကို လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း တရားဝင်ကြေငြာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်ခိုင်မာနေကြောင်း သိရပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းထောက် ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနိုကလည်း ဘလွန်ဒေါ ၆ ခုရှင်ဟာ ကတ်တလန်အသင်းမှာ ဆက်နေဖြစ်မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်လို့ ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းဖြစ်လာကြောင်း တင်ဆက်ပေးပါရစေ။